ပြင်ဦးလွင်ဒေသမှ ထုတ်လုပ်သည့် သစ်သားအနုစိတ် အမှတ်တရပစ္စည်းများကို ပြည်ပထက် ပြည်တွင်းစိတ်ဝ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၂-မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့မှ ထုတ်လုပ်သည့် သစ်သားအနုစိတ်အမှတ်တရပစ္စည်းများအား ပြည်ပကထက် ပြည်တွင်းမှစိတ်ဝင်စားမှုပိုများလာပြီး ပုံတူသစ် ပန်းချီများ အမှာများနေကြောင်း သိရသည်။
”သစ်သားအနုစိတ် အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကို ပြည်ပထက် ပြည်တွင်းက ပိုစိတ်ဝင်စားမှုပိုများတယ်။ ပြည်တွင်းက ပုံစံတူသစ် သားပန်းချီကိုအမှာများတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကို ပြင်ဦးလွင် နာရီစင်တို့၊ မြင်းလှည်းတို့ကို လက်ဆောင်ပေးကြတယ်”ဟု ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ Wooden Art လူငယ်ပညာရှင် ကိုဟိန်းကိုကို က ပြောသည်။
လက်ရှိသစ်သားအနုစိတ်အမှတ်တရပစ္စည်းဈေးကွက်တွင် မိသားစုပုံ၊ သူငယ်ချင်းပုံနှင့် ချစ်သူပုံစသည်ဖြင့် ပုံတူသစ်ပန်းချီများ အမှာများလျက်ရှိပြီး ယခင်နှစ်က ပုံတူသစ်ပန်းချီ ၁ဝဝ ခန့်သာပြု လုပ်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ပုံတူသစ်ပန်းချီ ၂ဝဝ ဝန်းကျင် ပြု လုပ်ခဲ့ရသည်။
ပုံတူသစ်ပန်းချီတွင် ရှစ်လက်မ x ၁၂ လက်မဆိုဒ်တစ်ပုံလျှင် ငွေကျပ်သုံးသောင်း၊ ၁၂ လက်မ x ၁၈ လက်မဆိုဒ်တစ်ပုံလျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းစသည်ဖြင့် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီး ပုံတူသစ် ပန်းချီတစ်ခု၏ အနုစိတ်မှုအပေါ်မူတည်၍ အချောသတ်ပြီး စီးရန် အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်မှ သုံးပတ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။
”ဒီပညာရပ်ကို ပြည်တွင်းက လာလေ့လာတာများတယ်။ လာမယ့်နှစ်ထဲမှာ ရန်ကုန်မှာသင်တန်းဖွင့်သွားမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများရင် မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီးမှာ သင်ကြားပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းက ၁ဝ ရက်၊ ၁၅ ရက်လောက်ကြာ မယ်”ဟု ကိုဟိန်းကိုကိုက ပြောသည်။
ပုံတူသစ်ပန်းချီအပြင် သစ်ရှုခင်းပန်းချီ၊ ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်၊ ရထားလုံး၊ မယ်နုအုတ်ကျောင်းနှင့် ရွှေကျောင်းကြီးစသည့် ပုံစံတူ သစ်သားအနုစိတ်အမှတ်တရပစ္စည်းများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး လာမည့် နှစ်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ရှုခင်းနှင့် နေရာပုံတူသစ်ပန်းချီများ နှင့် ရှေးခေတ်မြန်မာကျေးရွာပုံစံငယ်များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ကားဂိတ်ကြောင့် စံပြဈေးအနီးလေးထောင့်ကန်လမ်းတွင် နေ့စဉ်လမ်းပိတ်ဆို့နေ
ရာသီသစ်တွင် ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်သည့် ရေပန်းအစားဆုံး နည်းပြစာရင်းတွင် မော်ရင်ဟို ထိပ်ဆုံးနေရာတ?
သမ္မတမက္ကရီ၏ ချွေတာရေးမူဝါဒကို အာဂျင်တီးနား လူထု ဆန္ဒပြ